Rikoooo.com - Nke kacha FSX
Mpempe akwụkwọ na-agụghị akwụkwọ by Ọbịa » 19 Jun 2017, 20:04 kwuru
Enwere m Dell bụ 5 afọ. Mgbe m zụrụ ya, onye na-ere ya kwuru na ọ nwere kaadị eserese nke dị mma FSX. Ọ bụghị. Azụrụ m kaadị vidiyo vidio abụọ mere ka ọ ka mma mana ọ dịchaghị mma dịka m chọrọ.
Oge erugo ihi tebulu ọhụrụ. Achọrọ m kaadi vidiyo kacha mma ga-ekwe omume. nsogbu bụ na mmachi bụ $ 500. Nke a na-ekwu, Achọghị m ngwugwu ahụ, ntụgharị, nyocha, keyboard na òké. Enwetara m ihe ahụ niile. Achọrọ m ụlọ elu.
Ikwu eziokwu, amaghi m ihe m choro. Anọ m n’egwuregwu, ọ bụghị n’akụkụ nke teknụzụ, mana ọ ga-amasị m inweta enyemaka ọ bụla ị ga-enye m.
Jikọtara: 07 Jun 2017, 22:41 kwuru
Mpempe akwụkwọ na-agụghị akwụkwọ by joshrssmith » 03 Julaị 2017, 22:53
Eleghi anya nweta GTX 1050 Ti na ebulu 8gb ya na ejighi n'aka banyere ihe ndi ozo dika kapu. ndo, mana amaghi m otutu akuku na erughi $ 500 onuonya
Mpempe akwụkwọ na-agụghị akwụkwọ by jimidget » 21 Julaị 2017, 18:29
Daalụ maka Ama
Jikọtara: 03 Jun 2016, 07:38 kwuru
Mpempe akwụkwọ na-agụghị akwụkwọ by amberdog1 » 21 Julaị 2017, 22:52
Jim naanị maka ama, FSX dabere na processor, ihe ukwu ka mma. O buru na inwere ihe osise ndi 1gb o gha nma. M ga-akwado ezigbo i5 ma ọ bụ i7 7th gem processor. Olile anya na nke a na - enyere aka ... AD
Mpempe akwụkwọ na-agụghị akwụkwọ by JanneAir15 » 22 Julaị 2017, 06:48
Ma mgbe ikwuru FSX ị na-eche na ị na-enweta payware addons kwa. N'ihi na ha dị mma karịa (ọ na-adịkarị) ha chọrọ kaadị eserese ka mma. Can nwere ike zaa nke ahụ tupu m kwado ihe? Dị ka amberdog1 siri ezigbo CPU bụ ihe a chọrọ ma ọ bụrụ na ịchọrọ ịrụ ọrụ nke ọma.
Mpempe akwụkwọ na-agụghị akwụkwọ by jimidget » 08 Ọgọst 2017, 03:50
Daalụ maka ozi ahụ. BTW, A lara m ezumike nka na vet na ego ebumnuche. Anọ m na-ele anya na Ebay maka igwe na-agba ọsọ nke FSX.
Ọ bụrụ na ị nweta ohere, ị nwere ike ileba Ebay ma nyere m aka ịchọta otu.
Anyị enwere ike ikwenye site na Email iji mee ka ihe dị mfe. ozi ịntanetị m bụ jimidget@gmail.com
Mpempe akwụkwọ na-agụghị akwụkwọ by superskullmaster » 23 Sept 2017, 04:22
jimidget dere, sị: Daalụ maka ozi ahụ. BTW, A lara m ezumike nka na vet na ego ebumnuche. Anọ m na-ele anya na Ebay maka igwe na-agba ọsọ nke FSX.
Akwụsị na njedebe na ụbọchị 3. $ 539.99 ka ngwa ngwa.
Jikọtara: 08 Sept 2017, 06:53
Mpempe akwụkwọ na-agụghị akwụkwọ by xHobbit420x » 24 Sept 2017, 02:03
Eji m $ 300 rụọ ọrụ na laptọọpụ dell na-ere ahịa kachasị mma ma ọ na-aga nke ọma.
ihe mgbagwoju agbawa (nke m ga-akwalite mgbe m nwetara ego)
ị nwere ike ime nke ahụ, ma jiri 200 ọzọ $ ọzọ na ọkachamara ọkachamara na mma.
dị ka MegaEarthScenery. aga ala. malite na ebe obibi gị.
Obi ụtọ na-efe
Jikọtara: Abụọ 07 Feb 2017, 04:32
Mpempe akwụkwọ na-agụghị akwụkwọ by sylvantino » 14 Nọvemba 2017, 02:45
Ọ ga-amasị m ịbanye n'ime ma mezie echiche a na naanị ihe bụ n'ezie onye nrụpụta dị mma. Ọ ga-amasị m ịkọwapụta ụfọdụ ihe ekwesịrị ịtụle mgbe m na-eji ọgwụ eji eme ihe FSX or P3D ụdị ọ bụla.
1. FSX na P3D tupu V4 nke bụ 64 bit, na-enwekarị ọtụtụ nsogbu na otu ihe. Ndị a bụ VAS, OOM na Blurries.
2. SSD agaghị edozi nsogbu ma ọ bụ nsogbu nchekwa. Ọ gaghị edozi DX 10 Preview.
3 Ị nwere ike ịnwe usoro nhazi kachasị ọsọ n'ụwa, ma ọ gaghị edozi ihe ọ bụla dị n'elu.
Onu ego nke ebe nchekwa na kaadi eserese na ike ya di nkpa. Kaadị ebe nchekwa nọ karịa, ọ ga-eme ka iwe na-agụ gị belata.
Mgbe ahụ, enwere ndị DX10, ndị ụfọdụ na-aṅụ iyi site na ndị ọzọ na-emetụ aka DX10 na-ahọrọ ịnọgide na DX9.0c a ma ama ka ha nwee obere nsogbu, ma na DX9.0c, ị nwere nnukwu oge VAS na OOM.
Nke ahụ bụ ihe gbasara FSX na eziokwu ọ nọrọla anyị kemgbe ihe karịrị afọ iri, bụ na ọ na-aga n’ihu ịbanye igwe anyị n’uche ka anyị wee nweta ya kachasị mma dịka anyị nwere ike nke bụ nke ezughi ezu ma ọlị. Na atọ a na-enwe ezigbo processor, ọkacha mma a skylake i10 7 (7600k bụ ihe na-ewu ewu nke processor na iji nwayọọ karịa ezi i6700 7 site ụfọdụ oke (ihe ọ bụla processor na dị ka k mgbe ọ bụ iwu n'azụ ma na-eji nwayọ) , ọ jiri opekata mpe 6700/1060 1080-8GB jiri kaadị ebe nchekwa kaadị p3d saịtị ma lelee ihe ha chọrọ, ha bụ ndị mara mma nke ukwuu otu anụ ọhịa nwere a dị iche iche interface unil v4) Kemgbe FSX bụ 32 bit, ị gaghị eji ihe karịrị 2GB nke ebe nchekwa n'oge ọ bụla site na sistemụ. Ngwa ngwa ngwa (quad, chefuo ihe ọ bụla na-erughị ya, maka ọnụahịa ị nwere ike ịzụta ha ugbu a) yana otu etiti kaadị ndịna-elu. Nvidia Grapics nwere ọmarịcha ihe mmeri eserese nke eserese karịa afọ anọ gara aga.
N'oge a enwere ncheta dị ụkọ, yabụ ịzụta kaadị eserese ọhụrụ na ebe nchekwa zuru ezu iji wepụ VAS okwu agaghị adị ọnụ ala, aga m ejigide ruo mgbe afọ ọhụrụ ahụ gasịrị, hụ ebe ihe guzo na ịzụta eserese. kaadị (m ga-apụ n'ụzọ m iji mebie $ 500, nọgide na-echekwa ma zụta kaadị kaadị njedebe njedebe dị elu na ọtụtụ ebe nchekwa, maka ụgbọ elu ọ bụla sim ya dị oke mkpa !, ezigbo processor sitere na skylake i7 usoro ga-abụ ụzọ m ga-aga) .